Odayaal � Colaadaha Gedo waxa ay barakiciyeen dad badan� Gedo 23 Mar, 2012Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Gedo ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen saamaynta colaadaha iyo iska horimaadyada gobolkaas ka dhaca ay ku yeesheen dadka rayidka ah.Howlgalo iyo guluf colaadeed oo qeybo kamid ah gobolkaas ku dhex maray ciidamada Kenya, DFKG ah iyo Alshabaab ayaa waxa ay horaan qasaare naf iyo maalba u soo gaarsiiyeen goobo ay deganaayeen dadka rayid ah.
Horaantii sanadkan duqeyno ay gaysteen diyaarado ayaa waxa ay walxyeelo soo gaarsiisay dad rayid ah, iyadoo ay jireen ugu yaraan shan qof oo ay dileen ciidamada dagaalamaya.
Nabadoon Ibraahim Gadgadoon oo kamid ah waxgaradka degmada Ceelwaaq ayaa shegay in dagaalo ka dhacay deegaanka Buusaar ay ku qasbeen in dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa degan goobahaas ay isaga barakcaan guryahooda, iyagoo soo galay degmada Ceelwaaq halkaa oo uu sheegay in gargaar ay u qeybisay hay’adda WFP uusan ku filnayn.
Nabadoonka ayaa sheegay in xiliyada habeenkii ay dadka tuulooyin la isku horfadhiyo degan ay u qaxaan baadiyaha fog fog, maaliintii ay ganacsigooda dib ugu soo laabtaan, isagoo intaasi ku daray in koox kasta oo kamid ah dhinacyada dagaalamaya markii ay la wareegto gacan ku haynta deegaan ay dadka rayidka ah ku eedeeyaan inay la shaqaynayeen midba midka kale. Gobolka Gedo gaar ahaan tuulooyinka iyo deegaankada Buusaar, Tarako, Caasho Cad, Daarisalaam ayaa waxaa sameeyay colaadaha, iyadoo boqolaal qofna ay dani ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan.
Radio Ergo Faallooyin
Dhadhaab: Qaxootiga oo helaya waxbarasho jaamacadeed iyo xirfaddo oo lacag la'aan ah
Barakacayaal ku tabaaleysan Jannaale
200 qoys oo dib ugu barakacay Garoowe kadib markii dab baab,iyey Kaam Ajuuran oo ay degganaayeen.
380 qoys oo ka qaxay dagaalo ka dhacay Bay iyo Bakool
Dooloow: Qoysas ka badan 500 oo agab guryo laga dhisto loo qeybiyay
Fursadaha shaqo oo ku liita haweenka barakacayaasha Kismaayo
Qaxooti dib ugu noqday degmada Yurkud
Xarun caafimaad oo markii ugu horreysay laga hirgeliyay kaamamka Jowle ee duleedka Garoowe Qaxooti ka tegay Dhadhaab oo gaaray degmada Ceelwaaq ee Gedo
Dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ka codsanaya madaxda Soomaaliya inay soo booqdaan